NYINYISMIT: Free virus software key (ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ သုံးနေသော သူငယ်ချင်းများ အတွက်)
ဒီ Avast! Free Antivirus လေးက တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်သုံးစရာ မလိုပါဘူးနော် သူငယ်ချင်းတွေလည်း လိုချင်တယ် ဆိုရင် Avast! Free Antivirus software ကို ဒီမှာဒေါင်းပြီး စက်ထဲရောက်တာနဲ့ install လုပ်ပီး KEY လေးထည့်လိုက်ပါ။ KEY ရှာပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ 2038 အထိဖရီး သုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ ...
Posted by နေဇော် လင်း at 01:12
heinwai 10 June 2012 at 22:20
heinwai 10 June 2012 at 22:22